SAI may raadin karin qaar ka mid ah gawaarida ay qandaraas ku siisay TCDD | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTCA ma socon karto baabuurta qaar oo ay qandaraaslayaashu qaateen oo loo qoondeeyay TCDD
26 / 12 / 2017 06 Ankara, GUUD, TURKEY
Warbixinta TCA ayaa daaha ka qaaday fadeexada ka jirta TCDD. Marka loo eego; gawaarida waxaa loo qaaday saraakiisha dowlada iyadoo lagu xadgudbay tilmaanta qandaraaska. Si kastaba ha noqotee, gawaarida qaar lama go'aamin karin halka iyo cidda.
Maxkamadda hantidhawrka, Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) qaawiyey fadeexad weyn oo la xiriira Agaasinka Guud. In kasta oo aysan jirin wax arin ah oo ku saabsan qeexitaanka guud ee howlaha, hadana ma jiro arin laxiriirta qoondeynta gawaarida maamulka iyadoo dhamaan kharashyada ay kujiraan qandaraaslaha, waxaa la go'aamiyay in gaariga 2016 loo qoondeeyay TCDD ee hoos yimaada 358 ee hoos yimaada qandaraasyada la saxiixay.
Si kastaba ha noqotee, cidda gaadiidkan qaar loo qoondeeyay iyo halka gaadiidku ku yaallo lama go'aamin karo.
'WAA LAGU SAMEEYAA MAAMULKA'
Fadeexada ayaa lagu sharaxay warbixintii ay diyaarisay maxkamada xisaabaadka ee laxiriirta gaariga 358 ee loosiiyay TCDD taasoo ka hor imaaneysa qeexitaanka sida soo socota: Si kastaba ha noqotee, masiirka gawaarida ayaan la ogeyn sababta oo ah ma cada cidda loo qeybiyey gawaaridan qaarkood.
Marka la eego baaxadda qandaraaska dhismaha Palu-Genç-Muş, gawaarida 9 oo ay ku jiraan 8 dhul ahaanta iyo gawaarida rakaabka ee 17 lama qoondeeyay mana jiro wax macluumaad ah oo la helay oo ku saabsan cidda loo qoondeeyay gaariga 7.
Iyada oo lagu jiro baaxadda dayactirka wadooyinka ee 2 sannadlaha ah, gawaarida rakaabka ee 8 lama soo iibsan mana jiro wax macluumaad ah oo la siiyay cidda gawaaridan loo qoondeeyay.
Marka la eego baaxadda qandaraaska bixinta Yerköy-Sivas, Gawaarida 10 ayaa la iibsaday mana jirin wax macluumaad ah oo ku saabsan 4.
Marka loo eego baaxadda qandaraaska dhismaha ee Bursa-Yenişehir, gawaarida 10 iyo gawaarida 3 ayaa loo qoondeeyay, oo ay ku jiraan 13 dhulal iyo gawaarida rakaabka ee 7. Warbixinta, qayb ka mid ah gawaarida raaxada ee loo qoondeeyay ayaa sidoo kale loo wareejiyay Agaasimaha Guud ee TCDD, tirooyinka loo qoondeeyay mashruuca tirada gawaarida ayaa lagu qoray. In kasta oo digniinaha TCDD ee warbixinta sannadka 2015, warbixinta ayaa tilmaamtay in hirgelinta la sii waday sanadka 2016 sida soo socota: has Waxaa la arkay in gaadiid badan looga baahan yahay mashaariicda sida Palu-Genç-Muş iyo Ankaray. Dhaqankan waa in la joojiyaa. ”
Gawaarida ma la amray?
Ku-xigeenka CHP Trabzon iyo Wakiilka KIT Haluk Pekşen ayaa sameeyay bayaan ku saabsan warbixinta TCA ee shaaca ka qaaday fadeexada ka jirta TCDD. Pekşen wuxuu yidhi: “Xafiisyada dawlada ayaa ku xadgudbay sharciga wax soo iibsiga danaha shaqsiyadeed. Maxakamadda Hanti-dhowrka ayaa aqoonsatay oo ka digtay xadgudubkan, laakiin isla xadgudubkaas wuxuu ku sii socday 2016. Gawaarida '358', qiimaha ay ugu fadhiyaan shacabka, wadarta guud ee wadayaasha gawaaridaan shirkada iyo cidda isticmaaley lama ogaan karin. Haddii TCA aysan ka heli karin masiirka gawaarida, oo lagu wareejiyay gawaaridan, maxay tahay ujeedka gawaaridan loo adeegsado gawaarida? Maaddaama uusan mas'uul rasmi ahayn, waxaa cad inuu isagu yahay taageere xisbi. Xaaladdan oo kale, Xeer Ilaaliyaha Guud ee Ankara waa inuu la macaamilaa musuqmaasuqa. ”
Ma heli karno baabuurta tareenka gaadiidka tareenka
Trambus ama taraam? Van ayaa go'aanka gaari doona
Taksimka nostalgic ee Taksim ayaa dib u furaya